October 26, 2021 - Online Hartha
မိခင်အတွက် ငွေတစ်ပြားမှမထုတ်တဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ စိတ်သဘောထားအမှန်ကို မေးကြည့်လိုက်သောအခါ…
October 26, 2021 by Online Hartha
ကောင်မလေးက ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့“ကိုကြီးအိပ်နေတာ မနှိုးရဲဘူး”တဲ့
အရမ်းသဘောကျလို့ ကူးယူလာတာပါ။ တစ်ခါတုန်းက ကျနော့်မှာ သူ့အိမ်က ဒရိုင်ဘာကို အင်မတန်နိုင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် ဒရိုင်ဘာက သူ့ထက် အသက်ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က “ကို” တပ်ပြီး ခေါ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းကတော့ နာမည်ပဲခေါ်ပါတယ်လေစကားပြောလည်း သူငယ်ချင်းက မင်းနဲ့ ငါပဲ ဒရိုင်ဘာအကိုကြီးကတော့ သူ့အလုပ်ရှင်ဆိုတော့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံရတာပေါ့လေ… ဒီကောင်က ပြောစရာရှိလည်းပြော၊ ဆဲစရာရှိလည်းဆဲသဘောကောင်းပေမယ့် အထက်စီးတော့ဆန်ပါတယ်. တခါတလေ ကိုယ်ကတောင် ကြားထဲကနေ ဝင်အားနာရတယ်.. ဒရိုင်ဘာအပေါ် သူပြောပုံဆိုပုံတွေက ရင့်သီးပါတယ်..ဟိုကတော့ သည်းခံရှာပါတယ် အလုပ်ရှင်မလား…? ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ သူငယ်ချင်းက ဒေါကန်နေပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမေးလိုက်တော့ သူ့ဒရိုင်ဘာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ မလာလို့တဲ့ ဒါနဲ့ ဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီး အိမ်လိုက်သွားကြတယ်..တွေ့လို့ကတော့ ဆဲဆိုပြီး ဟောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ ဒီလိုနဲ့ ဒရိုင်ဘာအိမ်ရောက်သွားတယ်သူ့အမေလို့ ထင်ရတဲ့ အန်တီကြီးတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်၊ … Read more
ကြက်ဥကို အဟာရမပျက်စေဘဲ အချိန်၂နှစ်ကြာ ထားစားနိုင်တဲ့နည်း
ကြက်ဥကို အဟာရ မပျက်စေဘဲ အချိန်၂နှစ်ကြာ ထားစားနိုင်တဲ့နည်း ဒါတွေက ဆားရည်စိမ် ကြက်ဥတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေက ခြံထွက် ရေဆေးမထားတဲ့ ကြက်ဥတွေကို ထုံးရည်ထဲမှာ ထည့်ထားတာပါ။ ထုံးရည်က ကြက်ဥရဲ့ စိမ့်ပေါက် (ချွေးပေါက်)လေးတွေ အားလုံးထဲ ဖြည့်ပစ်လိုက်ပြီး ၎င်းတို့အား အင်္ဂတေကိုင်ထားလိုက်သလို ဝန်းရံနေပါမယ်။ ထုံးရည်ထဲမှာ စိမ်လျှက်ထားတဲ့ ကြက်ဥများအား အခုလိုမျိုး အခန်းအပူချိန်မှာ ၂နှစ်ကြာထိ သို လှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥအစိမ်းတွေကို ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်တဲ့ ဒီနည်းကို ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေ ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ၁၉၄၀ ပြည့်လွန် နှစ်တွေ နဲ့ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေထဲ အထိတောင်မှ တွေ့နေကြ အရာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာက ပုံမှန် မီးဖိုချောင်သုံး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ … Read more
အဖိုးကို ကယ်ပါနော် မထားခဲ့ပါနဲ့နော် မျှော်နေမယ်နော်တဲ့
အဖိုးကို…ကယ်ပါနော်… မထားခဲ့ပါနဲ့နော်…မျှော်နေမယ်နော် 😢😢 မိတ္ထီလာမြို့နားက ရွာလေးမှာ နေထိုင်ရင်း… ရန်ကုန်မြို့သို့ ဘုန်းကြီးတွေနှင့်အတူ…ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ဆေးပြဖို့… လိုက်လာခဲ့တယ် 😢 ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘာမှ နားမလည်သော အဖိုးအား…ဘုန်းကြီးတွေမှ ထားခဲ့တယ်ဟု… သိရပါတယ် 😔 ရန်ကုန်မြို့မှ နေစရာမရှိ…အသိမရှိပဲ ယောင်လည်လည်နှင့် ကျန်ခဲ့တယ် 😢 ကားမှတ်တိုင်လေးမှာ နေကော ညကော နေရင်း…နေထိုင်မကောင်း တနေ့ထက် တနေ့ဆိုးရွာလာပါတယ် 😢 ကျနော့်ကို အသိညီမလေး တယောက်မှ ကူညီတောင်းသဖြင့်… အဖိုးအား သွားရောက် တွေ့စုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 😔 အဖိုး နေရပ် ပြန်ချင်လား မေးတော့…မိသားစု မရှိပါဘူး သားရယ်…အဖိုး ခု ပြန်လဲ ပြုစု လုပ်ကျွေးမဲ့သူ မရှိဘူးတဲ့(ကူရာမဲ့ ဘဝပါတဲ့ 😢) ဟုတ်…ဒါဆို ရိပ်သာ နေချင်လား ဆိုတော့…နေချင်တာပေါ့ … Read more
FBသုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ်ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ မျက်ရည်ခိုင်ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်
ဖတ်ကြည့်မှ……သိမှာမို့…..ဖတ်ကြည့်နော့် ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ……။ လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ်…။ အချိန်တော်တော်ကြာမှအသက်ကယ်လှေတစ်စင်းရောက်လာတယ်…။ အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ်…။ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ်…။ အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကို စကားတစ်ခွန်းအော်ပြောလိုက်တယ်…။ ဒီနေရာအထိပြောပြီးတော့ ဆရာမကကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်တယ်…။ “မင်းတို့ ခန့်မှန်းကြည့်…အမျိုးသမီးက ဘာအော်ပြောလိုက်သလဲ?” ကျောင်းသားတွေကတော့ အလုအယက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ အော်ပြောကြတယ်…“ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်… ငါကို ထားပစ်ရစ်ခဲ့တယ်… ” အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကိုဘာမှမပြောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်…။ အဲဒီကျောင်းသူလေးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…“ဆရာမ… သမီး ထင်တယ်…။ အဲဒီ အမျိုးသမီးအော်ပြောလိုက်မှာက …ငါတို့ကလေးကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးပါ လို့” ဆရာမက အံ့သြသွားတယ်…သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်တယ်…“အဲဒီ ပုံပြင်ကို နားထောင်ဖူးလို့လာ?” ကျောင်းသူလေးက ခေါင်းကို ခါပြီး ပြောလိုက်တယ်…။ “ဟင့်အင်း… သမီး မေမေ နေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆုံးခါနီးမှာ … Read more
မန်တလေးမှ ကားလာဝယျသောဝယျသူနှငျ့ဈေးတညျ့ပွီး ဝယျသူမှငှခေပြွေီးတခါတညျး မောငျးသှားမညျဟုပွောလာအခါ
မန္တလေးမှ ကားလာဝယ်သော ဝယ်သူနှင့်ဈေးတည့်ပြီး ဝယ်သူမှငွေချေ၍ မောင်းသွားမည် ဟုပြောသောအခါ အကိုဆရာသည် မရသေးဘူး ခဏနေအုံး ဟုဆိုရ်ျ တပည့်တယောက်အား ဟေ့ ကားဘီး လေးလုံးစလုံး စစ်၊ ဘတ္ထရီစစ် ပီးရင် ဆီအပြည့် ဖြည့်ပေးလိုက်ဟု ပြောပီး အားလုံး လုပ်ကိုင် စစ်ဆေး ပီးစေကာမှ ရပီ နောင်ကြီးဟု ဆိုကာ ကားသော့ အပ်လိုက်သည်။ ဝယ်သူမှာ ပြောဖွယ်ရာမရှိ ရတနာပီတိ ဂွမ်းစီထိ သကဲ့သို့ ကားအသစ်ကြီးအား ပျော်ရွှင်စွာ မောင်းထွက်သွားလေတော့သည်။ ရင့်ကျက်မှူ နည်းသေးသော ကျွန်တော် သည် အကိုဆရာအား ဘာလို့ သူက မလုပ်ခိုင်းဘဲ အကိုက လုပ်ပေးလိုက်ရတာလဲဟု ရိုးရှင်းသော စိတ်ဖြင့်မေးရာ အကိုဆရာက ပြုံးရင်း သား ငါသူများလို showroom မဖွင့်ဘဲ … Read more
မဟာတနျးကြောငျးသူလေး အသုဘမီးသင်ျဂွိုလျခါနီး မိခငျမှ နောကျဆုံးအနနေဲ့နမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ
တိုးတက် ခေတ်မီ ချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီ နေကြပြီး ရှေးဟောင်း အယူသည်းမှုတွေကိုတော့ မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး။ သေရွာပြန် လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မဝင်ခိုင်းပါနဲ့။သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။ လူကို လူလို့ပဲမြင်ပြီး လူ အဖြစ် ပြန်အသိမှတ်ပြုပေးရမှာပေါ့။ ကံကောင်း လို့ မသေပဲ အသက်ရှင်လျက် ပြန်ရရှိလိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဘာလို့ မကြိုဆိုနိုင်ကြတာလဲ။ဘာလို့များ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်း ကို ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုချင်ရတာလဲ။ ကဲ ~ မလိုတဲ့ အယူအဆတွေ ပယ်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ၁၅ မိနစ်ခန့် မန္တလေး ကြာနီကန် သုဿန်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ကုန်ထုတ် ဓါတုဗေဒ … Read more
ရင်ဘောင်တန်းတယ်ဆိုပေမယ့် ကြောင်ဘယ်လောက်ခြေရာကြီးကြီးကျားကြီးကိုတော့ ဘယ်မှီမလဲ ညီမလေးရေ
ချစ်တာတော့ ချစ်ပါ ညီမလေးပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အခွင့်အရေးတော့ မပေးမိပါစေနဲ့သတိထား ညီမလေးအရေခွံဘယ်လောက်လဲလဲမြွေဆိုတာ တီဖြစ်မသွားဘူး ပြောင်းလဲတဲ့လောကကြီးမှာ လိုက်ဖက်ညီအောင်အရောင်ပြောင်းနေရင် ပုတ်သင်ညိုသာသာဖြစ်တော့မပေါ့ပတ္တမြားမှန်တယ်ဆိုတိုင်း နွံထဲဝင်မှိုင်ပြစရာလားကွယ်ခြေဆေးမခံရအောင် အိုင်ထဲထိုင်မယ့်အစားရေသန့်လို့တံဆိပ်ကပ်နိုင်ရင် တန်ဘိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ဝေးတိုင်းလဲ….အားမငယ်စိတ်မပျက်နဲ့အမောပြေရေတစ်ခွက် အိမ်ပြေးလေးအတွက်တဲ့အမေ နေ့တိုင်းခပ်ထားတယ်။မမှားဘူး ညီမလေးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာမိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်အရိုးဆို ကြည့်ရှောင်ရမယ်လေကိုယ်ကခဏတာဝါးမယ့်သွားမဟုတ်ဘူး စကားခလုတ်တွေ ဘယ်လောက်တိုက်တိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိခိုက်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်တကယ်တော့ ဟင်းကြေးများတယ်ဆိုတာအစားကောင်းစားရတဲ့သူတွေကို သမုတ်တဲ့ အမည်သက်သက်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝက်ကို တက်သိမ်းဖူးတယ်လေလေယူရာတိမ်းတတ်တဲ့ ပန်းပင်ဟာဘယ်လေကြမ်းကြောင့်မှ အမြစ်မကျိုးဘူးပုခက်လွဲသောလက်ဟာ ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ ချိုသော စကားပြောတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံလိုတယ် ညီမလေး..ညီမလေးရေ….ရင်ဘောင်တန်းတယ်ဆိုတိုင်းခြေရာတော့ လိုက်မတိုင်းလေနဲ့ကြောင်ဘယ်လောက်ခြေရာကြီးကြီးကျားကြီးကိုတော့ ဘယ်မှီမလဲအသားစားသတ္တဝါချင်းတူပေမယ့်စကားအဆိုသာ ကြောင်က ဆရာဖြစ်တာကျားဆိုတာ ကြောင်သားလဲ စားချင်စားမှာလေသဘာဝဘေးဆိုတာ သဘာဝတွေ ဆန့်ကျင့်လို့ဖြစ်ရတာ နစ်နာခြင်းမရှိရအောင် ဘောင်အတွင်းကသာ မိန်းမဆန်ပါ ညီမလေးရေ…..။ညီမလေးရေ…သစ္စာမှန်ရင် နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်တယ်တဲ့ခုခေတ်မှာတော့ နွယ်မြက်သစ်ပင်ဟာ အရက်ချက်ရင်သုံးနေကြပြီချစ်သူကို လွမ်းကြောင်းစာဖွဲ့ကောင်းတဲ့နတ်သျှင်နောင်ရဲ့ဖောက်ပြားမှု ဖွက်ထားတဲ့ သမိုင်းကြားမှာရှိသေးတယ်တို့ချစ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဧရာဝတီတောင် … Read more
သိမ်ဖျင်းတဲ့ယောက်ျားကတော့ အနာရှိလျှင် အရက်ပျံထိတော့ စပ်ကြမှာပဲ ဖတ်ကြည့်ပေါ့
သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်းဆိုတာ
“သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း” (အယူသီးနေတဲ့လူတွေ ဖတ်နိုင်အောင် တင်ဆက် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ) သားဦး သားနှောင်း မယူကောင်း ယူကောင်း (လက်ထပ် မင်္ဂလာပြုမယ့် မြန်မာ အမျိုးကောင်း သားသမီးများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ) ”ဦးဇော်ရှိသလားဗျို့”အော်ဟစ် အသံ ပေး၍ဝင်ရောက်လာသူမှာမောင်သန့်ဇင်ထွန်းဖြစ်သည်။ ”သြော်မောင်သန့် ဇင်ထွန်း ပါလား။ အိမ်ကိုအလည်မလာတာတောင်အတော်ကြာသွားပြီနော်။ ဒါနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရောအဆင်ပြေ ရဲ့လား။ ”ဟုတ်ကဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေတာလေးတစ်ခု ရှိနေလို့။” မောင်သန့်ဇင်ထွန်းကရယ်၍ပြောသည်။ ”မင်း ဒါပေမဲ့က ဘာလဲဟ၊ ပြောပြစမ်းပါအုံး။ ”ဒီလိုဦးဇော်ရေ၊ ကျွန်တော်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လူငယ်တွေသဘာဝ မေတ္တာမျှနေတယ်။အဲဒါဒုက္ခ အကြီးအကျယ်တွေ့နေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ ”ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးရောက်နေတာလဲကွ။ ”ကျွန်တော့် မိသားစုထဲမှာ ကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးမ ဟုတ်လား။ အဲ..ကျွန်တော့်ချစ်သူကတော့ သူတို့မိသားစုထဲမှာ အကြီးဆုံးလေ။ အဲဒီတော့ သားဦးနဲ့ … Read more